लिम्वूवान - विविध सामग्री: सामान्य रङ्गवादको आयतन : एक प्रतिबद्धता-पत्र
सामान्य रङ्गवादको आयतन : एक प्रतिबद्धता-पत्र
१ भीरैभीरको रङ्ग कविताकृतिको प्रकाशन २०६० सालको अन्ततिरमा 'विशेष रङ्गवादको घोषणा'ले विषय प्रवेश पाएबमोजिम प्रस्तुत आलेखन 'विशेष रङ्गवादको आयतन एक प्रतिबद्धता पत्र' शीर्षक अगाडि सारिएको छ । 'जे-जति थियो, छ, हुँदछ रङ्ग मात्तै' भन्ने रङ्गको प्रधान अस्तित्वको दलबलको भेटघाटपछि 'रङ्गको सृष्टिमा वापतको भान पनि अन्तरिम छ, भेड्तैभेड्तै अन्सारले क्रियाकलापको अल्मल् लिऔं' भन्ने नाराका साथ विशेष रङ्गवाद नेपाली जमीनको साहित्यबाट प्रसारण आरम्भ भएको व्यष्टि या आयतन हो ।
२ खासगरी प्राथमिक रङ्ग रातो, पहेंलो, नीलोको मिश्रण र विघटनबाट बन्ने अगणित रङ्गको विभिन्नताबाट अस्तित्व, क्रियाकलाप, व्यहोरा हुन्छ- लाई जग्गा मान्नु, प्राणीको बनोट र गुण रङ्गबाट सञ्चालित छ- को बन्दोबस्ती । बाँकी नै नभई पुरापुर पृथ्वी रङ्ग हो मान्नु । यसको विघटन, मिश्रण, प्रवृति, चरित्र, प्रक्रिया, प्रक्रम खोज्नु । यसै सिद्धान्तलाई रङ्गवाद भनिएको छ र त्यसलाई थप साझा या रङगिनमा जोड दिनु अगाडिपट्टकिो 'विशेष' काटिएर 'सामान्य'मा शंसोधन थपिएको छ ।
३ पूर्वतिरको एउटा दन्त्यकथा यस्तो छ । बनी गर्न टाढा जानुपर्ने, बाबु-आमाले बोली फुटिनसकेको आफ्नो छोरालाई कुकुरसँग बाँधेर राख्ने गर्दथे रे, पछि वोलि फुट्दाको बेलामा छोरोले कुकुरजस्तै भुक्यो रे ।
४ एउटा किरात लोककथा यस्तो छ । तिगेन्जङ्ना (महिला पात्र)को एउटा केशामी र अर्को नाम्सामी दुइ जना छोराहरू थियो । केशामी बाघ थियो भने नामशामी मान्छे । उमेर पुग्दैजाँदा बाघले मान्छे खानु खोज्नु थाले । आमाले नाना जुक्तिको साथ लुकाउदा पनि आमा माथि नै खनिनु थाल्यो । नभेटाइदिए आमालाई नै खाने जस्तो वचन गर्नु थाल्यो । यस्तै हैरानीले एकदिन आमाले देखाईदियो कि तल सिमलको रुखमा छ भनेर । केशामी सरासर आरालो लागेर सिमलको रुख चढ्नु थाल्यो । संकेतको लागि तिगेन्जङ्नाले रोपेको दुइवटा फूल मध्ये सिल्लरी फुलचाहिँ ओइलिनु थाल्यो क्रमश लामो समयसम्म । जति बाघ चड्दै गयो, डराउदै, अत्तालिन्दै गयो नाम्सामी, उति ओइलाउदै गयो सिल्लरी, आमाको सास रोकिनुगरि । नजिकमा पुगेपछि डराएको नाम्सामीले वाँड् छोड्यो । एकसेएक सिल्लरी मौलियो, अन्दङ् चाहिँ सुकेर गयो । आमा ढुक्क भयो । केशामी यहाँ पराजित भयो ।
५ यो वातावरण, तापक्रम र जीन, अनुवंशिकताको सम्बन्धनको कुरा हो । चीजसँग हरेकमा यसको उपस्थिति, प्रस्तुति रहन्छ । यसको समन्वय, सहअस्तित्व, विरोधाभाष छ । ढुङ्गा र माटोको आआफ्नै भर जस्तै । तापक्रमले होराइजोन्टल तानीइ राखेको छ प्रकृतिलाई यसमा । विपरीत जीन, अनुवंशिक्ता भर्टिकल पक्रिरहन्छ । तानातानको हलचल, चलमल प्रधान, कहिले कता, कता कहिले, असमानता, विपरितताको उपस्थितिको भागीमा अस्तित्व र गतिशीलता र रङ्ग त्यही छ पनि । वस्तुमा, चीजमा, थोकमा, मनमा, मस्तिस्कमा सदा यो रङ्ग अजीव छँदैछ ।
-बाँध्नु या केशामी पक्षले तापक्रम, वातावरण, पर्यावरण, प्रतिरङ्गसँग सम्बन्ध राख्छ ।
-बोल्नु या नाम्सामी पक्षले जीन, अनुवंशिकता, अन्तरङ्गसँग सम्बन्ध राख्छ ।
७ दुइ फरक कथामा यहाँ एउटामा अनुवंशिकताको पराजय या दुर्वलता भेट खाएको छ भने अर्कोमा वातावरणको पराजय या दुर्वलता भेटिएको छ । यी पराजित, विस्थापित पक्षहरू विजयीको छवैमा अलि छेलिएर भने वसेको छ । यो सामाजिक सिक्रिको सूचना हो । एतिका साथ सामान्य रङ्गवाद यो दन्त्यकथाहरूको निगमनको साधारण आगमन प्रणालीबाट उद्गमन भएको बनावटी हो ।
८ नेपाली सिमानाको इतिहासले प्रदर्शन गरेको मनोविज्ञानिक भूगोलको केही विभाग यस्तो छ । आम सामाजिक व्यापारको ओरिपरि साहित्य उभिन्छ । एक आपसको पक्षगत घुलमिलको नियन्त्रण कुनैचिज बाहिर रहने कुरो छैन । उपलब्ध समयको धेरै हद नियन्त्रण राजनीतिक चहलपहलको अचेतनाले ठाडो गर्दैछ । अब शासकीय इतिहास यो माटोमा, हामी उभिन्दै गर्दाको ठाउँमा भएको प्रमुख चलखेलहरू अलिकति वर्गिकरण गर्दछु । साहित्यको विकासक्रमलाई यसले देख्नु सजिलो पर्छ । सुगौली सन्धी (डिसम्बर-२, १९१५) पछि दरबारिया बाँडफाँडको झैझगडामा फस्यो । निश्चित वंशभित्र सत्ता, शासन हत्याउनु एक सूत्रीय सोच बन्यो । शक्तिशालीले भनुँ, शक्तिमा पुगेपछि भनुँ, शक्तिमा पुग्नु भनुँ, मारकाट, र्सवस्वहरण, देशनिकाला, कारावास आदि रुपको माध्यम मात्र चल्यो । बि.सं. १९०३ को कोत हत्याकाण्ड पछि अरु वंशहरू किनारा लागे । एकै परिवारभित्रको प्रक्रिया चाहिँ उही नै थियो । बि.सं. २००७ सालको परिवर्तन संस्थागत हुन्दै गर्दाको २०१७ को घटना पछि निर्दलियको शासनको प्रथा शुरु भयो । बि.सं. २०४६ पछि धेरैवटा दलले शासन गर्ने प्रथा देखियो । धानिँदै आएका कुराहरूको लिष्ट यस्तो देखिन्छ । सूचकांकले हयाँ धकेलेको छ । छेकेको छ । सप्पै प्रकारको आन्दोलन माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, दलहरूको सडक आन्दोलन, जातिय, महिला, मधेशी, कर्णालीको आन्दोलन यस्तै यस्तै भत्काउनु र बनाउनुको आन्दोलनको चाङ्को बीचैबाट साहित्यमा पुनसंरचनाको लागि वि. सं. २०६० को राजनीतिक तापक्रममा हामी कुरो राख्तैछौ, मिश्रणको, बहुलताको, असमानताको, विपरीतताको, सपअस्तित्वको या रङ्गको गुण र विशेस्ताको ।
९ एसबीच सप्पै कालमा आजसम्म भगवानको नाममा धर्म अगाडि छ । धर्म शासक बनेको छ । समस्या र अप्ठ्यारामा आइनपुग्दै, जुध्नु नपरी इश्वरको जिम्मामा लगाइँदैछ । बेसी भाग्यले शासन गर्दैछ । व्यक्ति कसै अरुको अधिनमा छोडेर रहेको जस्तो । जसले प्रत्येक मान्छेलाई बालक नै बनाइराखेको अभियोग पत्र दर्ता छ । आफ्नो अभिभावक आफैँ बन्न नखोजेको, नसकेको, नचाहेको अभियानमा । सच्याउनुलाई यस्तो पूर्वीय दर्शनमा परिवर्तन गर्नु, विघटन गर्नु, विज्ञान थप्नु हाम्रो यात्रा रहन्छ ।
१० एसोरी जम्माजम्मी अघि भेटघाट भएको दर्शनहरू एकीकृत, केन्द्रीकृत देखिन्छ । अझ कि बढी इश्वरकृत देख्छु कि अर्कोतिर अति भौतिकवादी रुट । मानवताको पक्षमा पनि दाँदे कुदाउँदै छ । धर्मको लागि मान्छे भन्ने मन्त्रमा गोलमटोल पारेर थुपारेको छ । चलमल गर्न नसक्नेगरी पोको पारेको छ । राजनीतिक चिन्तनले मान्छेसम्म झारेर केन्द्रविन्दु बनाएर अठ्याउँछ । मान्छे भन्नु अगणित विशेषता, अपरिमित विभिन्नता, असंख्य सम्भाव्यतालाई पन्छाएर समग्रतामा पुर्याई थुपार्नु मिल्दैन भन्छु । जो पनि मान्छे अमान्छे कसै छैन । रगत सप्पैको रातो हुन्छ भन्नु सरासर समष्टितिर लाग्नु नै हुन्छ । यसबाट समष्टि, समग्र, सम्पुर्ण छोड्दै अपुर्ण, अंशसंख्या, प्रकार, किसिमको कुरो बोक्नु छौ ।
११ पश्चिम भूगोलको नक्शातिर इतिहासको चरमसीमा या दशाको कुरो उठेको छ । निर्माणको चरण पछि, आविष्कारको चरणपछि मान्छेलाई व्याख्या गर्न अब दर्शनहरूको खाल्सा, फाल्सा प्रायशः अनुपस्थित पछि औधोगिकता एवम् आधुनिकताको चरमसीमा या अन्तिम सीमाभन्दा अगाडि बढिसके पछि वर्तमान समयलाई इतिहास रोकिन पुगेको भन्ने मत छ । मानव विकासको इतिहास यहाँभन्दा अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको भन्ने निष्कर्षविद्वानहरूको छ । यसबाट केही प्रतिशत भिन्नता, नयाँपनकोसाथ घट्ना अगाडि बढ्छ, त्यो निकै पर पुग्दा निकै नयाँ बन्छ, देखाउनुछ प्रत्येक दिन झुल्किने घाममा व्यक्तिको क्रिया र घट्ना स्वभाविक भिन्न, नयाँ, अरु रङ्ग बन्दै जान्छ ।
१२ आधुनिक विश्व प्रविधिको राज्यमा यन्त्रको उपयोग र उपभोगले दिनदिनै मान्छेलाई यन्त्रमा उल्था गर्दैछ । आविष्कारले उपलब्ध गरेको सुविधा मानवजीवन प्रति नै समर्पित छ । जसको एकोहोरोमा पेलाई छ । यो असर र प्रभावको मार्कामा जीवन परेको छ । यसबाट क्लनिङ्लाई पनि तालमेल गर्नुछ । व्यक्तिलाई मान्छेले जित्न सक्तैन । व्यक्तिले अचेतनलाई जित्न सक्तैन, चिनाउनुछ ।
१३ समाज, संस्कार, धर्म, कानुन आदिको रोकावटले छेकेको धेरै इच्छा या पक्षका थोकहरू मनको अचेतन तहमा भरिएको व्यक्तिको संरचनामा अचेतनाको भूमिका हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विश्लेषणको मान्यताले यहाँ भेट खानुपर्छ । यही±यसरी±यति सम्पत्ति पक्रेको भन्ने देख्नुछ । व्यक्ति स्वचालनको कार्यकारण अचेतना मान्दै यसको हिसावकिताव गर्नुछ ।
१४ ह्याँबाट भन्नु पनि छ । एकजना सीधा मान्छे हुँदैन । मान्छे हुनको लागि जाति हुनुपर्छ । जाति हुनुको लागि व्यक्ति त हुनुपर्छ । राज्य, सत्ता, संस्था कमशल हुनुपर्छ तर प्रत्येकको ठेगानाले र्सतमा जहीँको तहीँ ठामको ठाम, मितिको मितिमा फरकता पर्छ । एकापसमा ओहोरदोहोर गराएर अनेकनताको हेरचाह गर्नुपर्छ । अपूर्णताको पक्षमा स्थितिको खण्ड-खण्ड छुट्याएर जिम्मा लिनुपर्छ । यस अघि मरिहत्ते गरेको कुनै पनि दर्शनले समानतामा, एकतामा, सम्पूर्णतामा, सम्याउनु सकेन, सक्दैन, हुँदैन पनि । अब व्यक्ति संस्था सर्वोपरि छ । आफूलाई भेट्दा, आफूले भेट्दा अरु छ नहराऔँ, नबिर्र्सौँ, नभुलौँ । फरकता हो, हुन्छ, हुनुपर्छ । अनेकता हो, हुन्छ, हुनुपर्छ । सपअस्तित्वको समन्वय गर्नुछ यो रङ्गदृष्टिकोणको चालचलनमा ।
१५ यो अव्यवस्थाको प्रवन्ध सही ढंगमा रङ्गले, रङ्ग प्रवृतिले, रङ्ग दृष्टिले गर्नु भ्याउछ भन्नु हाम्रो हिसाव छ । मानिलिउँ कोठाभित्र हुनुहुन्छ । भीत्ता देख्नु रङ्ग । कोट्याउनु रङ्ग । टुक्रयाउनु रङ्ग । घर पूरै भत्काउनु रङ्ग । यस्तो छ खेल, दृष्टिमा । रङ्गको अन्तिम छैन । जीवन छैन । शून्य पनि रङ्ग, गतिशीलता, क्रियाशीलता, अस्तित्व बराबर रङ्ग बन्छ ।
१६ रङ्गको हालिमुहालि, छ्यापछ्याप्ति रङ्गको आयोजना जगत र जिवनमा क्रिया छ । क्रियाहरू रङ्ग हुन् । क्रिया शिद्धान्तबाट क्रियाकलाप व्यवहारवाद हुँदोछ । रङ्गको क्रिया, अन्तरिम, आवधिक, क्षणिक छ । रङ्गको बिशेष्तामा, गुणमा, मिश्रणवाद, भन्नु बहुलवाद, बहुलवाद भन्नू, विपरिततावाद, विपरिततावाद भन्नू असमानतावाद, असमानतावाद भन्नु सवअस्तित्ववाद, सवअस्तित्ववाद भन्नू दोहोरो मापदण्ड आदि इत्यादि भने घुमेको छ । कारण रङग भन्नु एक भएन अनेकौं हो एक संख्या होइन, असंख्य, एकता होइन अनेकनता ।
१७ विघटनसँग संङ्गठन चलिरहने प्रथाले बाँधेको छ चलनलाई, शब्दमा, आवाजमा, वातावरणमा, चित्रमा, स्थितिमा, संसारमा, ठाममा, साक्षीमा । विभिन्नता, विविधता सप्पैमा रङ्ग छ, पदार्थ र क्रोमोजोम दुइ विपरीत नै रङ्ग भए वापत बग्छ, बहन्छ, फैलिन्छ, उफ्रीन्छ, घुम्छ रङ्गीता । एकापसको अनुभूतात्मक, निजात्मक, तालमेलमा खेलकूद आयोजितमा नजित्ने गरिकन । फरक-फरक ढङ्गको क्रियाकलापको सामान्य रङ्गवादी निर्माणको मनसायले क्षेत्रफलको प्रान्तमा टुक्रिऔं ।
१) वर्तमानको विघटन गर्नु । २) खेलाँचीको सिद्धान्त आत्मसात गर्नु । ३) केन्द्रीयरहति स्थितिको निर्माण गर्नु । ४) मिश्रणलाई भेटघाट गर्नु । ५) स्वफैसलालाई आत्मसात गर्नु । ६) रङ्गीताकोमा भानमा पुग्नु । ७) अ अक्षरसँग सहयात्री हुनु । ८) खुल्ला चिन्तनको रक्षा गर्नु । ९) प्रतिरङ्ग, अन्तरङ्ग संस्कृतिको व्यवस्थापन गर्नु
१८ उसो त रङ्गभन्दा विशेष केही छैन । बेसी केही छैन । व्यापक केही छैन । पर केही छैन । रङ्ग किताब । हरफ । धर्म । संस्कृति । विनियम । प्रक्रिया हो । ह्याँ अब नयाँ ठाउँ देखौँ । नयाँ ठाउँमा उभौँ । नयाँ थोकमा लिऔँ । छौँ मान्नु । यो निष्कर्षो पानामा हामी गतिशील उभिएको छौ ।
Posted by limbu at 5:59 PM
नारायणहिटी संग्रहालयको स्वरूप
नयाँ लेखकको जन्म - घोषणापत्र
भारत पश्चिम वंगालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विद्र...
किन बन्न सक्दैन किरातको नाममा राष्ट्र-राज्य
हाम्रा सुनाखरीहरु कसरी जोगाउने ?
जय गणतन्त्र नेपाल !
नेपाली उत्तरआधुनिकता, मार्क्सवाद र सृजनशील अराजकता...
गणतन्त्र लिम्वूवान र राष्ट्रपतिमण्डलको प्रस्ताव
किन लिम्बुवानलाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ ?